माघ दोस्रो हप्तादेखि तेस्रो लहर आउनसक्छ – List Khabar
Home / समाचार / माघ दोस्रो हप्तादेखि तेस्रो लहर आउनसक्छ
माघ दोस्रो हप्तादेखि तेस्रो लहर आउनसक्छ
admin January 4, 2022 समाचार Leaveacomment 146 Views
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिन नदिन सतर्कताका लागि अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।हालसम्म नेपालमा तीन जनामा मात्र ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
तर आगामी माघ दोस्रो हप्तादेखि तेस्रो लहर आउनसक्ने देखिएकाले सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘अर्को लहरमा देखापर्ने पूर्व संकेत देखिसकेकाले माघको दोस्रो सातापछि अर्को लहर आउने प्रक्षेपण गरिएको छ, ’मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘मन्त्रालयले यस बिषयमा र्‍यापिड एक्सन प्लान तयार गरिरहेको छ ।’
उनका अनुसार तेस्रो लहर आएमा दोस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुगेको बेला भन्दा बढी संक्रमित हुन सक्छन् । दोस्रो लहरमा एकैदिन ९ हजार २ सय संक्रमित थपिएका थिए, जसका कारण अस्पतालहरुमा वेड र अक्सिजनसमेत अभाव भएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार तेस्रो लहर आउनसक्ने केही पूर्वसंकेत देखिसकेको छ ।
भारतका विभिन्न शहरमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार हालसम्म १५०० भन्दा बढी ओमिक्रोनका केसहरु पुष्टि भइसकेका छन् । खुला सीमा भए कारण भारतमा फैलिएको संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि सीमा नाकाबाट कोरोनाका केसहरु भित्रिएका थिए । ‘भारतका पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्डमा तथा दिल्लीमा ओमिक्रोनको संख्या बढिरहेको छ ।
केही शहरमा सेमि लकडाउनमा गइसकेका छन्,’ महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘रोजगारमा गएका नेपाली फर्कने क्रम बढ्नसक्छ, जसले गर्दा नेपालमा ओमिक्रोन भित्रिने सम्भावना बढ्छ ।यसअघि भारतमा डेल्टा भेरियन्टबाट संक्रमित भेटिएको ४६ दिनपछि नेपालमा पनि देखिएको थियो ।
तर, ओमिक्रोन अन्य भेरियन्टभन्दा तीव्र फैलिने भएकाले केही हप्ताभित्रमै नेपालमा आउनसक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । भारतमा पिक लिएको एक–दुई हप्तामा नेपालमा ओमिक्रोनले केही स्वरुप लिनसक्छ,’ संक्रमण रोग विज्ञ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘ सिमाना र विमानस्थलबाट ओमिक्रोन संक्रमित सहजै भित्रने भएकाले संक्रमण रोक्न चुनौती देखिन्छ ।’
दोस्रो लहरमा जब भारतमा संक्रमित बढ्न थाले, नेपालीहरु घर फर्किन थाले । विगतका दिनमा सिमानाकामा समयै कडाइ नगर्दा कोरोना सीमा नाका वरपरका गाउँ तथा ठूला शहरमा पुग्यो र पछि समुदाय स्तरसम्म पुग्यो। तर, सरकारले अहिले पनि संक्रमण रोक्नका कडाइ गरेको छैन । सीमा नाका खुला छन् । भारतको उच्च जोखिम क्षेत्रबाट आएका मानिसको परीक्षण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सजिलैसँग ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिने निश्चित नै छ ।
Previous स्थानीय तहले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई शतप्रतिशत सेवासुविधा दिन थाले , तपाईको स्थानीय तह कुन..?
Next प्रेमीले नै आफ्नी प्रेमिका लाई येस्तो फोटो पठाएर ७० लाख मागेपछि…